Shikhar Samachar | नाथुराम गोड्से को हुन् ? गान्धीको हत्या किन गरे ? नाथुराम गोड्से को हुन् ? गान्धीको हत्या किन गरे ?
नाथुराम गोड्से को हुन् ? गान्धीको हत्या किन गरे ?
प्रकाशित मिती: २०७८ जेष्ठ २९
३० जनवरी, १९४८ मा भारतको राजधानी दिल्लीस्थित आफ्नो आश्रममा साँझ प्रार्थना गर्न निस्किंदै गर्दा हिन्दू अतिवादी नाथुराम गोड्सेले चलाएको गोलीबाट मोहनदास करमचन्द गान्धीको निधन भयो । अहिंसालाई जीवन–दर्शनको रूपमा अँगालेका र कर्मले ‘महात्मा’ उपनाम पाएका गान्धी स्वयम् हिंसाकै शिकार भई मृत्युवरण गर्नु ठूलो विडम्बना थियो।
अहिंसा र सद्भाव, गान्धीको जीवनका सार थिए । तर, राजनीतिमा निरपेक्ष अहिंसा र सद्भाव कति सम्भव भन्नेमा दार्शनिक रूपमै गम्भीर मतभेद छन्।
३० जनवरी, १९४८ मा नाथुराम गोड्सेले गोली हानी गान्धीको हत्या गरे । गोड्से हिन्दु राष्ट्रवादी तथा लामो समयसम्म राष्ट्रिय स्वयमसेवक समाज (आरएसएस)का सदस्य रहिसकेका ब्यक्ति थिए । आरएसएसनै अहिलेको सत्तासिन दल भारतिय जनता पार्टीको बैचारिक तथा साघंठनिक पृष्ठभुमी हो । अरु हिन्दु अतिवादीले जस्तै भारत विभाजनका दौरान गान्धीले मुस्लिमलाई बढी फाइदा पुर्याएको भन्ने सोचेर गोड्सेले गान्धीको हत्या गरेका थिए । त्यसैले धेरैले गान्धीको हत्यालाई हिन्दु राष्ट्रवादको बर्बर आतङ्कको रुपमा लिने गरेका छन् ।
भारतका हिन्दु राष्ट्रवादीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि गोड्से दशकौंसम्म आरएसएसका सदस्य रहेका थिए । गोड्सेको प्रशङ्ग आउँदा उनीहरु गोड्से गान्धीको हत्या गर्नु वर्षौ पहिला मात्रै आरएसएसको सदस्य भएको झुट बोल्छन् । तर धेरै एतिहासिक दस्तावेजले भन्छ कि गान्धीको हत्या गरिएको दिनसम्मपनि आरएसएस तथा त्यसका नेतासँग गोड्सेको घनिष्ट सम्बन्ध मात्र थिएन, नियमित संवाद पनि हुने गरेको थियो । फासीँदिनु केही पहिला समेत गोड्सेले आरएसएसको आधिकारिक गीत गुन्गुनाउँदै थिए ।
आजसम्मपनि आरएसएसले गोड्सेले जीवनभर अनुशरण गरेको विभाजन र हिंषाको राजनीति पछ्याइरहेको छ । यो सत्तारुण दल भाजपाको भातृसंघठनमा कतिपय भाजपा नेता तथा संसदहरु नै आबद्ध छन् जसले गोड्सेलाई ठूलो राष्ट्रवादी बिम्बको रुपमा लिने गर्छन् । हासोँ लाग्दो त यो छ कि २०१४ को चुनावी विजय पश्चात् भाजपा र आरएसएस दुवै गान्धीको छविलाई ‘क्यास’ गर्न लागि परेका छन् ।
केन्द्रिय सरकारमा नियन्त्रण पाइसकेपछि, हिन्दु राष्ट्रवादीहरु अहिले नयाँ इतिहास लेखाउन उद्देलित छन् । यनीहरु झुटको खेती गर्दै आफ्ना सबै काम आधुनिक भारत निर्माणको लागि जायज थिए भन्ने देखाउन चाहन्छन् । स्वतन्त्रता संग्रामका दौरान धेरैजसो हिन्दु राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिसप्रति नतमस्तक देखिन्थे । अहिले आरएसएस र भाजपा दुवै गान्धीको बडाइ–चडाइ गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री नरेन्दर मोदी जो विदेशी आएपनि तिनलाई लिएर गान्धीधाम या आश्रम पुगिहाल्छन् । तर गान्धीले तिनका दल र आरएसएसका अतिवादी प्रवृति तथा उच्छृङ्खल गतिविधिको कहिल्यै समर्थन गरेनन् ।
यिनका अहिलेका यि सबै गतिविधि एकदमै ढोंगी छन् । किनकी तिनकै अतिवादी बिचारधाराका कारण गान्धीको हत्या भयो । गान्धीमा पनि धेरै कमीकमजोरी छन् तरपनि उनले भाजपा र आरएसएसका हिंषात्मक र विभाजनकारी राजनीतिको कहिल्यै समर्थन गरेनन् । भाजपाले आजसम्मपनि मुस्लिमलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’को रुपमा लिइरहेको छ । तर गान्धीले सबै धर्मावलम्बीले स्वतनत्र रुपमा राज्यको कुनैपनि प्रकारको भेदभाव र दमनबिना बाच्न पाउने कुराको वकालत गर्दै आए ।
उनले पटक–पटक लेखेका थिए कि हिन्दु र मुस्लिमबीचको बैमनस्यता र अविस्वासको मुल कारण भनेको औपनिवेशिक सत्ताले स्वार्थानुकुल दुई समुदायबीच गरेको विभेदकारी ब्यावहार हो । अहिले पनि हिन्दु राष्ट्रवादीहरु भारतलाई हिन्दु राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्न तल्लिन छन्, त्यतिबेलै गान्धीको भारतलाई उदार लोकतन्त्र बनाउने सपना थियो । उनको ‘स्वराज’को अवधारणाको मुख्य जग भनेकै साप्रदायिक एकता र ब्रिटिसविरुद्धको एकिकृत आन्दोलन थियो ।
गान्धी र अन्य हिन्दु राष्ट्रवादीबीचको फरक त ‘भगवान राम’प्रतिको फरक–फरक बुझाइबाट नै प्रष्ट हुन्छ । पौराणिक रामकथाका धेरै स्वरुप छन् । भाजपा, आरएसएस तथा अन्य हिन्दु राष्ट्रवादीहरुले धेरै पहिलादेखि नै राष्ट्रवादको एजेण्डामा रामलाई जोड्ने गरेका छन् । आफ्ना समर्थकलाई हौस्याउन उनीहरु ‘जय श्री राम’को नारा लगाउने गर्छन् । र, यही नारा फलाक्दै उनीहरु मुस्लिमको मास लिचिङ वा कत्लेआम गर्छन् ।
राम राज्य न्यायप्रेमी थियो भन्ने मान्यता उत्तरी भारतमा ब्याप्त छ । त्यसैले उत्तरी भारतका किसानलाई प्रभाव पारेर स्वतन्त्रता संग्राममा अग्रसर गराउन गान्धीले रामको प्रशङ्ग ल्याएका थिए । उनले बिभाजनको लागि होइन एकताको लागि यसो गरेका थिए । ‘सबै भगवानका नामहरुले एउटैलाई जनाउँछ, त्यो भनेको इश्वर र अल्हाह नै हो’ गान्धीको तर्क थियो । गान्धीले रामको प्रयोग एकताको लागि गरेका थिए भने भाजपा र आरएसएसले यसलाई हिन्दु सर्वोच्चता कायम गर्न र हिंष्रक गतिविधिमा प्रयोग गरिने नारामा रुपान्तरण गरेका छन् ।
त्यसैले गान्धीले खेपिरहेको जातिवादीको आरोपका कारण आफू दुःखी भएको ढोंग जुन हिन्दु राष्ट्रवादीले अहिले देखाइरहेका छन् यो राजनीतिक, नैतिक र इमानका हिषावले पनि पटक्कै मेल खादैँन । गान्धी स्वयम्ले आफ्नो छविको रक्षा गर्नुपर्नेछ ।